Niova ny marketing mivantana - Tsy ny lalàna 40/40/20 intsony | Martech Zone
Alahady, Aogositra 26, 2007 Alatsinainy, Aogositra 27, 2007 Douglas Karr
Nandamina ny talak-bokiko aho tamin'ity maraina ity ary namaky ny boky Direct Marketing taloha izay ananako, Direct Mail an'ny Nomery. Navoakan'ny Post Office amerikana izy io ary torolàlana tena tsara. Rehefa nanao mailaka mivantana aho dia nankany amin'ny Postmaster teo an-toerana ary naka boaty iray tamin'izy ireo. Rehefa nihaona tamin'ny mpanjifa izay mbola tsy nanao Direct Mail teo aloha izahay dia loharano lehibe ho azy ireo hianarana ny tombony amin'ny marketing mivantana.
Raha nandinika ny boky androany aho dia nahatsapa fa niova be ny zavatra tao anatin'ny folo taona lasa - na dia tao anatin'ny taona vitsivitsy lasa aza.
Ny teôria taloha momba ny varotra mivantana dia ny lalàna 40/40/20:
40% ny valiny dia noho ny lisitra nalefanao. Ity dia mety ho lisitra novidinao ho an'ny faniriana na mety ahitana ny lisitry ny mpanjifa misy anao.
40% ny valiny dia noho ny tolotra nataonao. Nolazaiko foana tamin'ny mpanjifa fa ny fotoana nanananao tamin'ny fampielezana mailaka mivantana hanintonana ny vinavina dia mitovy amin'ny isan'ny dingana eo anelanelan'ny boaty mailaka sy ny fako.
20% ny valiny dia noho ny famoronana anao. Tamin'ity faran'ny herinandro ity dia nahazo mailaka mivantana aho avy amina mpanamboatra trano vaovao. Ao aminy no lakilen'ny fitsapana tao an-trano modely. Raha mifanaraka ny lakile dia mahazo ny trano ianao. Fanolorana mahaliana iray izay mety hahatonga ahy handroaka ny fiaraha-monina akaiky indrindra - tena mamorona.
Direct Mail sy Telemarketing dia nampiasa an'io fitsipi-pikarohana io nandritra ny am-polony taona lasa. Ny Do Call Call Registry sy ny hetsika CAN-SPAM dia nanaporofo fa ny mpanjifa reraky ny fidirana an-tsehatra ary tsy mahazaka fangatahana raha tsy mahazo alalana. Raha ny marina dia mino aho fa ny tsy fisian'ny fahazoan-dàlana dia hisy fiatraikany ratsy amin'ny fampielezan-kevitrao ary mendrika hampitombo ny maha-zava-dehibe ny Lisitra.
Word of Mouth Marketing dia ampahany lehibe amin'ny marketing an'ny orinasa tsirairay - saingy tsy an'ny departemantan'ny marketing no an'ny tompony fa an'ny mpanjifa. Raha tsy afaka manatanteraka ny fampanantenanao ianao dia ho henon'ny olona haingana kokoa noho ny fotoana laniny hanaovana ny fampielezan-kevitrao. Ny varotra am-bava dia hisy fiantraikany lehibe amin'ny fampielezana marketing rehetra. Raha tsy afaka manatitra ianao dia aza mampanantena.
Tsy mora mivoaka ny lela, nefa mino aho fa ny fitsipika vaovao dia ny lalàna 5-2-2-1
50% ny valiny dia noho ny lisitra alefanao ary ny zava-dehibe indrindra amin'izany lisitra izany dia ny fahazoan-dàlana tokony hiresahana amin'izy ireo ary koa ny tanjon'ny lisitra.
20% ny valiny dia vokatry ny hafatra. Tsy maintsy atao ny mikendry ny hafatra ho an'ny mpihaino. Ny hafatra mety ho an'ny mpihaino marina amin'ny fotoana mety no hany fomba tokana ahafahanao mitazona alalana sy mahazo valiny ilainao amin'ny ezaka varotrao.
20% ny valiny dia noho ny Landing. Ho an'ny marketing amin'ny mailaka, pejy fananganana ity sy ny serivisy manaraka ary ny fanatanterahana ny vokatra na serivisy. Raha tsy afaka manatanteraka ny fampanantenanao ny varotrao dia hamoaka haingana kokoa ilay hafatra noho ny azonao atao ny manangona azy io. Tsy maintsy "mametraka" tsara ny mpanjifa ianao mba hananana fitomboana amin'ny ho avy.
10% dia mbola ny famoronana ny fampielezan-kevitrao amin'ny marketing. Mety hieritreritra ianao fa miteny aho fa ny famoronana tsy dia zava-dehibe noho ny taloha - tsy marina izany - ny fahazoan-dàlana, ny hafatra ary ny fipetrahana dia manandanja kokoa noho ny taloha.
Ny lalàna 40/40/20 taloha momba ny varotra mivantana dia tsy mba nahazo alalana velively, varotra am-bava, na fanatanterahana ny vokatrao sy ny serivisinao. Heveriko fa ny 5-2-2-1 Fitsipika no!
26 Aogositra 2007 amin'ny 9:36 PM
Tokony holazaiko fa ny rohy dokambarotrao ho andalana voalohany amin'ny famoahana bilaogy rehetra dia manasarotra ny manapa-kevitra amin'izay tiako hovakiana ao amin'ny FeedDemon. Satria tsy azoko intsony ny andalana voalohany, dia mahazo ny doka fotsiny aho, dia matetika no manisy marika ny famahanana manontolo rehefa vakiana nefa tsy miditra ao.
Na dia takatro aza fa ilaina ny manatsara ny fampahafantarana dia manome soso-kevitra aho fa angamba ny fametrahana ilay doka an-tsoratra ao amin'ny vatan'ny fandefasana fa tsy ny andalana voalohany no ahafahan'ny atiny ho lasa manintona kokoa ary mamela ny olona toa ahy hanapa-kevitra am-pahendrena raha hijery ny hevitra tsara na tsia ny fandefasana.
26 Aogositra 2007 amin'ny 9:54 PM
Tim, hevitra tsara izany. Tsikaritro fa ny tenako rehefa avy nandefa azy io ary nanadino azy… hariva izao dia namindra azy tany amin'ny faran'ny sakafo aho. Misaotra nanokana fotoana hampahafantatra ahy. Tena tiako ilay izy!
26 Aogositra 2007 amin'ny 10:17 PM
Doug, misaotra fa sady mahatakatra no mamaly.